पोषण विशेषज्ञलाई प्रश्नः तिहारमा कस्तो खानपान गर्ने? :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
पोषण विशेषज्ञलाई प्रश्नः तिहारमा कस्तो खानपान गर्ने?
कमला गुरुङ शुक्रबार, कात्तिक १९, २०७८, ०६:३४:००
काठमाडौं- दसैँमा जस्तै तिहारमा पनि खानपानको विशेष महत्व हुन्छ। तिहार भन्ने बित्तिकै हामी सेल रोटी अनि गुलिया मिठाईलाई सम्झन्छौँ।
माछा मासुसँगै चिल्लो रोटी अनि गुलिया मिठाई खाँदा स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्छ। तर आवश्यकता अनुसार मात्रा मिलाएर गरिएको खानपानले भने स्वास्थ्यमा कुनै असर गर्दैन।
खानपानमा ध्यान नदिए अपच हुने, वान्ता हुने, पेट दुख्ने जस्ता समस्या पनि निम्तन सक्छ। यिनै विषयमा रहेर हामीले स्टार अस्पतालकी पोषण विशेषज्ञ चन्द्रमाला अवस्थीसँग थप कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
तिहारमा कस्तो खानपान गर्नुपर्छ ?
– पहिले पहिले लामो समयसम्म नबिग्रियोस् भनेर रोटी र खानेकुराई डिप फ्राई गरिन्थ्यो।
– तर अहिले विभिन्न सुविधा आइसकेकाले खानेकुरालाई लामो समयसम्म भण्डारण गर्न आवश्यक छैन।
– रोटी तथा मिठाईहरु खानै नहुने भन्ने होइन। तर मात्रा मिलाएर खानुपर्छ।
– एकै पटक धेरै मात्रामा खानेकुरा खाँदा शरीरमा नकारात्मक असर पर्छ।
– कसैको घरमा पाहुना भएर जाँदा मिठाईको सट्टा फलफूल पनि लान सकिन्छ।
– दिनमा एउटा रोटी वा मिठाई खाँदा कुनै असर गर्दैन। तर धेरै खायौँ भने असर पक्कै गर्छ।
धेरै चिल्लो र गुलियो भएको खानेकुरा खाँदा यसले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ ?
– तत्काल देखिने समस्या भनेको अपच हो।
– पेट दुख्ने तथा फुल्ने, वान्ता हुने समस्या तत्काल देखिन्छ।
– बजारमा मिठाई खरिद गर्दा कस्तो ठाउँमा खरिद गर्दैछौं, डेट एक्सपायर भएको छ÷छैन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।
– सकेसम्म मिठाई घरमै बनाएर खानु सबैभन्दा राम्रो हो।
– अनावश्यक रुपमा खाँदा शरीरको तौल बढ्नुका साथै भएका रोगहरु पनि बढ्न सक्छ।
घरमै मिठाई बनाएर खानुको फाइदाहरु के के छन् ?
– घरमा मिठाई बनाउँदा हामीले सबै सामानहरु ताजा नै राख्न सक्छौं।
– मिठाईमा चिनी नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। चिनीको सट्टा सख्खर, मह पनि राख्न सकिन्छ।
– घरमै बनाइएको मिठाई स्वास्थ्यका हिसाबले पनि धेरै राम्रो हुन्छ।
तिहारमा एकै पटक धेरै रोटीहरु बनाईन्छ। अनि हप्तौंसम्म पनि खाने चलन छ। यसको विकल्प अरु के हुन सक्छन् ?
– एकै पटक धेरै परिमाणमा रोटीहरु बनाउनु भएन।
– रोटी बनाउँदा डाल्डा घ्युमा बनाउनु हुँदैन। तेलको छनोटमा ध्यान दिनुपर्छ।
– जथाभावी रुपमा भण्डारण गर्नु हुँदैन।
– यदी रोटीमा ढुसी लागिसकेको छ भने तताएर पनि खान मिल्दैन।
अन्त्यमा यहाँको सुझावहरु के के छन् ?
– तिहार मनाइ रहँदा खानपानमा पनि ध्यान दिऔँ।
– तरकारी, सागसब्जी, फलफूल र पानीको मात्रा पनि बढाउनुपर्छ।
– कोल्ड ड्रिंक्सको विकल्पमा मोही, कागती पानी खान सकिन्छ।
कुनै पनि बिरामीलाई रिफर गर्न नपरोस्: डा प्रियंका शर्मा
अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले किन रकम दिन ढिला गरिरहेको छ?
डिप्रेसनको उपचार सम्भव छ: करुणा कुँवर [भिडियो] मनोविद करुणा कुँवरसँग हामीले डिप्रेसन के हो ? किन हुन्छ र कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थप कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको भिडियो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः ७ घण्टा पहिले
डिप्रेसनको उपचार सम्भव छ: करुणा कुँवर [भिडियो] ७ घण्टा पहिले